Nova Launcher Prime azo amidy amidy € 0,50 | Androidsis
Nova Launcher Prime, ny kinova Premium an'ny mpandefa fampiharana lehibe, amidy amina € 0,50
Raha misy mpandefa izany nahalala ny fomba fanao mifanaraka amin'ny fotoana fa milalao amin'ny Android izy ireo, ity no Nova Launcher. Mpandefa rindrambaiko izay amidy amin'izao fotoana izao ao amin'ny kinova pro ho an'ny 0,50 €. Fihenam-bidy lehibe mety misy ifandraisany amin'ireo ahiahy momba ny mety hanjavona ilay vatasarihana fampiharana amin'ny Android N.
Nova Launcher dia mpandefa fampiharana izay manana fampiharana mahafinaritra, manolotra fampisehoana tena tsara ary fohy amin'ny endriny izy io, ka mitovy amin'ny Google Launcher. Mpandefa iray izay afaka nanohy nivoatra tamin'ny andian-dahatsoratra manan-danja toy ny mety vonoy ny écran amin'ny paompy roa eo amin'ny birao.
Satria i Google dia manana ny Google Launcher ao amin'ny Play Store, ny marina dia betsaka ny mpandefa launcher izay nanana fotoana tsy afaka niatrika ny an'ny Google. Na dia i Nova Launcher aza no niseho ho mpandresy hitsangana ankehitriny ho mpandefa fampiharana tsara indrindra misy. Mpandefa launcher, izay raha marina ny fanjavonan'ny vatasarihana fampiharana anao amin'ny Android N, azo antoka fa izany io dia ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra hamerina an'io fampiasa io amin'ny tranokalanao.
Ity iray ity Premium Version mamela ny fidirana amin'ny endri-javatra sasany Tena zava-dehibe toy ny fihetsika manokana, kaontera mbola tsy voavaky, vondrona manokana ao anaty vatasarihana, safidy hanafenana fampiharana, fikosehana amin'ny sary masina ary vokany bebe kokoa amin'ny horonan-taratasy amin'ny birao.
Raha efa hitanao ny dikan-teny maimaim-poana ho tonga lafatra isan'andro isan'andro amin'ny telefaona findainao, aza hadino ity fotoana mahafinaritra ity ho an'ny 50 cents fotsiny. Tsarovy fa tsy maintsy apetrakao ny kinova maimaimpoana mba hampiasana ny safidin'ny premium an'ny Nova Launcher Prime amin'ny telefaonao.
Nova mpandefa Prime
Developer: Rindrambaiko TeslaCoil
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Nova Launcher Prime, ny kinova Premium an'ny mpandefa fampiharana lehibe, amidy amina € 0,50
Mitadiava mpanakanto vaovao miaraka amin'ny Playlists mahita vaovao amin'ny Spotify